Olee otú Hichapụ Photos si iPhone iOS 8 / iOS7
Olee otú Hichapụ Photos si iPhone (iPhone 6s Plus na iPhone 6s gụnyere)
Ọtụtụ ndị mmadụ na ihichapụ foto site na iPhone ukwuu n'ime n'ihi photos ogide nke ukwuu ohere. Otu nnyocha e mere anyị mere na-egosi na ihe karịrị 42,37% nke ndị mmadụ nwere ihe karịrị 400 photos na ha onwe ha iPhone, na 26,49% nke ndị mmadụ nwere ihe karịrị 800 photos ha na ekwentị. Ọ bụ ike kwere, ziri ezi? Nke ahụ bụ eziokwu. N'ozuzu-ekwu okwu, 750 photos ga-ogide 1.7GB. Ọ bụrụ na gị iPhone abịa na naanị 16GB, mgbe ahụ, ị ​​ga-ewere ụfọdụ edinam onwe elu na ohere mgbe nile. Na otu ihe kwesịrị ihichapụ foto site na iPhone. Ịhọrọ ụzọ ziri ezi n'okpuru wepụ foto gị iPhone dị ka gị mkpa.
Part 1. Nzọụkwụ iji Hichapụ Photos na gị iPhone Iji aka
Part 2. Ngwa ngwa Hichapụ All Photos si iPhone, ma na Igwefoto Roll (weghaara photos) na Photo Library (photos synced si iTunes)
Part 3.-adịgide adịgide Hichapụ Photos si iPhone
Ọ bụrụ na ị dị nnọọ chọrọ ka ihichapụ erughị 10 photos na gị iPhone, mgbe ahụ, ị ​​dị nnọọ mkpa ka ihichapụ ya aka na gị iPhone. Ọ bụ nnọọ mfe mezue ọrụ.
Enweta Photos ngwa gị iPhone, na-emeghe album ebe photos ị chọrọ ka ihichapụ bụ. Kpatụ 'Họrọ' nhọrọ n'elu nri. Na mgbe ahụ enweta foto otu otu iji họrọ ha. Mgbe ahụ, enweta dustbin na ala n'aka nri. Na mmapụta ahụ, ọ ga-agwa gị otú ọtụtụ photos na-aga-ehichapụ. Enweta bọtịnụ n'ịkwado nhichapụ. Ọ bụ ya.
Ọ bụrụ na ị kwalite gị iPhone na iOS 9 ma ọ bụ ị na-eji iPhone 6s / iPhone 6s Plus, ka ihichapụ photos, ị kwesịrị ị na enweta Photos ngwa> oghe 'ndondo kwukwara'> mgbata 'Họrọ'> Họrọ photos na enweta na dustbin na na ala nri akuku.
IHE: Mgbe ihichapụ foto site na iPhone 6s / iPhone 6s Plus ma ọ bụ ndị ọzọ iPhones na-agba ọsọ iOS 9, gị ehichapụ photos n'ezie adịghị aga ozugbo. Ha na-ewepụ na nchekwa 'nso nso ehichapụ' si ebe ehichapụ photos ga-nọ ruo ụbọchị 30. Ọ bụrụ na ị na-achọ iji wepụ ha n'ebe ahụ, na-aga 'nso nso ehichapụ'> mgbata 'Họrọ'> ahọrọ photos> mgbata 'Hichapụ' wepu ha. Na ị pụrụ ịhụ na 'nso nso ehichapụ' nchekwa, mgbe ahọpụta photos, e nwere ihe ọzọ nhọrọ 'Naghachi'. Ị nwere ike pịa ya naghachi foto na ị na-na na-ehichapụ na gị iPhone.
Part 2. Ngwa ngwa Hichapụ All Photos si iPhone, ma na Igwefoto Roll (weghaara photos) na Photo Library (synced si iTunes)
Ụfọdụ ndị na-ekwu na ha chọrọ a ụzọ ngwa ngwa hichapụ ihe niile foto site na iPhone. Nke ahụ bụ nnọọ mfe. Ị nwere ike ihichapụ foto niile si iPhone site na isoro usoro n'okpuru:
Hichapụ niile foto site na Igwefoto Roll (photos weghaara gị iPhone)
Jiri eriri USB jikọọ gị iPhone gị na kọmputa, ma Mac na Windows kọmputa ga-eme. Ọ bụrụ na ị na-eji a Mac, mgbe ahụ, ẹkedori Image Capture ma ọ bụ iPhoto na gị Mac. Na-ekpe sidebar, pịa gị iPhone. Na nri n'akụkụ, họrọ ihe niile photos na pịa Nhichapụ icon Iji hichapụ ihe niile foto gị iPhone Igwefoto Roll. Ọ bụrụ na ị na-eji iPhoto nkwado ndabere na mpaghara foto gị iPhone gị Mac, mgbe nkwado ndabere na mpaghara, a mmapụta ga-egosi, na-arịọ gị ma ka ihichapụ foto niile ma ọ bụ. Gosi na nhichapụ. Ọ bụrụ na ị na-eji a Windows PC, mgbe Ijikọ iPhone na gị PC, na 'My Computer', chọta gị iPhone na pịa imeghe ya. Na nchekwa, chọta ma họrọ foto niile. Pịa 'Nhichapụ' isi ihe na-hichapụ ihe niile foto gị iPhone Igwefoto Roll.
Hichapụ niile foto site na Photo Library (photos synced si iTunes)
Jikọọ gị iPhone gị na kọmputa site na eriri USB na ẹkedori iTunes. Pịa gị iPhone na iTunes na ịnyagharịa ka Photos taabụ si ebe ị na synced foto gị. N'ebe ahụ, ego 'mmekọrịta Photos si' na-ahọrọ ihe efu nchekwa ka mmekọrịta photos na gị iPhone. Mgbe ahụ, ị ​​pụrụ ịhụ na ihe nile synced foto gị iPhone dị nnọọ arahụ.
Ụzọ ẹkenam ke akụkụ 1 na akụkụ 2 nwere ike ihichapụ foto site na iPhone, ma nwere ike ghara ihichapụ foto gị iPhone kpamkpam. Na software, Wondershare Dr.Fone maka iOS, ị nwere ike naghachi ehichapụ foto gị iPhone mfe. Ọ pụtara na ọ bụrụ gị iPhone agwụ na ndị ọzọ ndị mmadụ aka ma na ị nwere ụfọdụ dị mkpa photos, mgbe ahụ, ọ bụ nnọọ ize ndụ n'ihi na ndị mmadụ nwere ike naputa ha. Nke ahụ bụ ihe mere ụfọdụ celebrity si nudes nwere leaked si n'ụzọ dị nnọọ mfe. Na nke a, ị pụrụ iji ihichapụ kpam kpam foto gị iPhone. Ime ya, i kwesịrị iji Wondershare SafeEraser. Ọ na-mepụtara ihichapu foto site na iPhone ntukwasi-obi. Mgbe iji ya, ọbụna Dr.Fone maka iOS apụghị naghachi ọ bụla foto gị iPhone. N'okpuru ebe a bụ nzọụkwụ ihichapụ kpam kpam foto site na iPhone na Wondershare SafeEraser.
Nzọụkwụ 1 Nhichapụ foto gị iPhone
Open Photos ngwa gị iPhone. Chọta foto na ị chọrọ ka ihichapụ. Enweta 'Họrọ' iji họrọ photos na enweta na dustbin na ala nri akuku ka ihichapụ ha manully.
Ọ bụrụ na gị iPhone bụ iPhone 6s, iPhone 6s Plus ma ọ bụ ihe ọ bụla iPhone na-agba ọsọ iOS 9, akpa ihichapụ foto na 'ndondo kwukwara'. Wee mepee nchekwa 'nso nso ehichapụ', jiri otu ụzọ ka ihichapụ foto na ị na-adịghị mkpa na nchekwa.
Nzọụkwụ 2 Download na wụnye Wondershare SafeEraser
Ma Wondershare SafeEraser (Windows) na Wondershare SafeEraser maka Mac dị ka ike ibudata. Pịa download button na-echichi ngwugwu. Wụnye na-agba ya na kọmputa gị. Jikọọ gị iPhone gị na kọmputa site na eriri USB.
Nzọụkwụ 3 iṅomi maka Nhichapụ foto na iPhone
Na isi, pịa 'ihichapu ehichapụ faịlụ' ka omume na-iṅomi gị iPhone maka ehichapụ photos. Ọ pụrụ iri sekọnd ole na ole rụchaa usoro.
Nzọụkwụ 4 Hichapụ foto site na iPhone kpamkpam
Na N'ihi na peeji, ego 'Photos' ma pịa 'ihichapu Ugbu a'. Nọgidenụ na-iPhone ejikọrọ n'oge usoro. Mgbe ọ na-ọma ehichapụ foto gị iPhone, a window ga-agwa gị.
Download Wondershare SafeEraser inwe a na-agbalị ugbu a!
Nkuzi maka iPhone mkpọchi / Power Button rụkwaa
> Resource> iPhone> Olee otú iji Hichapụ Photos si iPhone